फोटो हेरेर पत्ता लगाउनुहोस्, यो हत्या हो कि आत्महत्या ? ९९ प्रतिशत जवाफ गलत – SaipalNews.com
एजेन्सी। पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा एउटा चित्र निकै भाइरल भइरहेको छ । यो तस्वीर हेरेर यो हत्या हो वा आत्महत्या पत्ता लगाउन चुनौती दिइएको छ । यो हत्या हो वा आत्महत्या पत्ता लगाउने सुराग पनि यही फोटोमा भएको बताइएको छ । यो चुनौतीको जवाफ दिनेहरुमध्ये ९९ प्रतिशतले गलत जवाफ दिएको बताइएको छ । आउनुहोस् अब तपाइँ पनि यो तस्वीर हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् यो हत्या हो कि आत्महत्या ?
अब जवाफको लागि यो फोटोमा रातो चिन्ह लगाइएका कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोस्
भित्तामा रक्सीको बोतल फ्याँकेर फुटाइएको छ । यसको मतलत व्यक्ति नशामा थिए । पल्टिएको कुर्सी र कोठामा फैलिएका सामान हेर्दा ती व्यक्ति निकै रिसमा भएको र सामान फ्याँकिरहेको बुझिन्छ । झ्यालबाहिर भागिरहेका व्यक्ति देख्दा त्यही व्यक्तिले हत्या गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, अर्को झ्यालबाहिर रुखमुनि देखिएको खुट्टाको छाप हेर्दा बुझिन्छ बाहिर भाग्ने व्यक्ति रुखाुनि शौच गर्नको लागि आएका थिए र उनको हत्यासँग कुनै सम्बन्ध छैन । ती व्यक्ति गोली चलेको आवाज सुनेर भागिरहेका थिए ।
भुइँमा रगत फैलिएको छ । बन्दुक मृत व्यक्तिको हातको ठिक मुनि छ । यसको अर्थ हुन्छ ती व्यक्तिले अगाडि झुकेर आफ्नो टाउकोमा आफैंले गोली हानेका हुन् । यही कारण कोठामा रगत फैलिएको हो । भित्तामा टाँगिएको चार्टमा हेर्दा थाहा हुन्छ ती व्यक्तिको कम्पनी पूरै डुबेको छ । चार्टमा उनको मूल्य एक्कासी झरेको ग्राफमा प्रस्ट देखिएको छ । यही कारण ती व्यक्ति रक्सी पिएर तोडफेड गर्दै थिए र त्यही जोशमा आत्महत्या गरेका हुन् ।
४५ उद्योगको दर्ता खारेज